Nkesa karịrị oge nke Linux distros | Site na Linux
Nkesa karịrị oge nke Linux distros
Pikico | | GNU / Linux, Na-atụ aro
Ezigbo ndị na-agụ akwụkwọ!
Ebumnuche bụ isi ederede a bụ ime ka ndị na-amaghị ya mata ma ọ bụ hụ ya naanị mgbe ọ na-agafe na ikekwe dị ka ịmata ihe, ihe onyonyo na-egosi anyị Nkesa karịrị oge nke Linux distros. Ọ ga-adị ka njem na-atọ ụtọ - gịnị kpatara na - - na maapụ m na-ahụ anya dị ka ihe mmụta na-atọ ụtọ.
Enweghi ike iwebata ka anyi banye n'okwu a.
1 Atọ Distros nke mbụ dịka usoro iheomume nke GNU / Linux
2 Ogo nke ezinụlọ ọ bụla nke Distrik atọ nke mbụ
3 Linux bụ nkewa. Kedu distro m ga-ahọrọ?
Atọ Distros nke mbụ dịka usoro iheomume nke GNU / Linux
Ka ha nwee ike soro m nke ọma site na njem a, ihe mbụ ha kwesịrị ime bụ ibudata na saịtị ahụ «GNU / LOgex Nkesa Oge»Ihe oyiyi na-anọchite anya Nkesa karịrị oge nke Linux distros. N'ụzọ ahụ, anyị ga-ekwupụta okwu site na a GUI ma ọ bughi otù console. Mmmmmmmmmmmm
Oge Nkesa Linux - Wikipedia
Na na website ha na-enye mbipute 12.10 akara ụbọchị 2012-10-29, nke nwere ike ibudata na dị iche iche formats. Ka anyị kelee ndị njikwa saịtị ahụ ndị gosipụtara onwe ha dị ka A. Lundqvist y D. Rodic. N'otu aka ahụ Fabio loli na-enye anyị onyonyo emelitere ruo ụbọchị anyị nwere ike ịlele Wikipedia.
Anyị na-emeghe onyinyo ahụ, nke dị ogologo ma dị warara, anyị wee họrọ mbugharị na 100% iji gụọ aha ụfọdụ na nghọta doro anya. Site n'ụzọ anyị na-ahụ akụkụ nke - oke Linux - nkesa.
Na-enyocha ihe mmụta dị oke mkpa ma na-abanyeghị na mkparịta ụka nkà ihe ọmụma-akụkọ ihe mere eme banyere onye buru ụzọ bịa, ma ọ bụrụ na ọkụkọ ma ọ bụ akwa, anyị na-agwa onwe anyị na onye kacha ochie ma ọ bụ Nke mbụ Mgbasa ozi ha bụ Debian, Slackware y Red Hat, n'usoro site n'elu ruo ala, ma ọ bụ site n'aka ekpe gaa n'aka nri ma ọ bụrụ na anyị atụgharịa ihe oyiyi 90 ka aka ekpe.
N'ezie anyị ga-ezute Ogha que Ha esighi na nke atọ ndị mbụ nakwa na ha dị ndụ ma ọ dịkarịa ala ruo na njedebe nke 2012, mgbe e bipụtara ihe oyiyi ahụ. Anyị ga-ekwu banyere ha webOS, Openwall, OpenWRT, Ekwensu, SmothWall GPL, nwa nkita, Black ite, Linux njikwa, Dibịa afa, GoboLinnux, RIP, NixOS, SliTaz, Enoch (Gentoo bụ ihe ewepụtara ya), Alpine, Rock, Linux Site Sccha, 0 (ee, odi ma obu adi a distro na na aha), Igbe, uClinux, Coyote, BrazilFW, Zeroshell, ELinOS, KaelOS, Penaut, CRUX, Arch, Specifix, Openfiler, etcetera, etcetera, wdg maka ndi m wepuru ma o bu fuo n’agbata afọ 2012 na 2016, maka ndi ohuru amuru n’otu oge, ma obu ndi ga-abia.
Anyị chọrọ igosi na ọkpara nke Slackware ugha AHSE, onye mere ka ọ dị ndụ mgbe ọ dị obere. Red Hat enwekwara ụmụ mmalite WGS Linux Pro, ma ndụ nwa nwoke ahụ dị nnọọ mkpụmkpụ.
O doro anya na Nkesa kacha ochie na eluigwe na ala Linux na nke dịkwa ndụ taa bụ, Debian, Slackware y Red Hat.
LNkwupụta gara aga apụtaghị na ha bụ nkesa kachasị mma n'ihi na, ma ọ bụ họọrọ site, onye ọrụ ikpeazụ ma obu site n'aka gi.
Ogo nke ezinụlọ ọ bụla nke Distrik atọ nke mbụ
Ihe onyonyo a dị mma ịtụgharị iji nwee ekele site na ọnọdụ dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị bugharia ya 90 degrees ma ọ bụ ọbụna dọba ya kpodoro isi ala, ọ ka na-egosi na Ọtụtụ ụmụ bụ Debian. Gịnị kpatara ya, otu na-eju anya? Echeghị m na ọ bụ n’ihi na ọ kacha sexy y -ekpo ọkụ nke atọ ndị mbụ. 😉
Ọnụọgụ nke ezinụlọ ụmụ Debian abụọ dịkwa mkpa: Nkpuru y Ubuntu.
Ekem ubon oro etienede Red Hat, na n'ikpeazụ Slackware.
Site na ntụle echiche anyị nwere ike ikwenye na usoro n'usoro nke Ọnụ ọgụgụ ezinụlọ nke nke ọ bụla na Distrik atọ bụ: Debian -> Uhie okpu -> Slackware.
Linux bụ nkewa. Kedu distro m ga-ahọrọ?
Ke ibuotikọ m bipụtara akpọ «Nnwere onwe ime nhọrọ«Na June 24, 2013, egosiri m echiche m banyere otu esi ahọrọ nkesa nyere ịdị adị nke ọtụtụ Ogha, m rụtụrụ aka na Akpati Distros ma ọ bụ Distros mbụ dị ka ezigbo mmalite. Ma ma ebe a, m na-echekwa nke ahụ onye ọ bụla na-ahọrọ dị ka echiche ya, nghọta ma ọ bụ ihe mere. Anyị enweghị ike inye onye ndu na-adịghị agha agha n'akụkụ a.
Na ọzọ isiokwu akpọ «Kedu ihe m ji eji Debian na desktọpụ m?«, E bipụtara na Machị 27, 2013, akọwara m ihe kpatara m n’isi okwu a ma ọ naghị esiri m ike ịkọwa na m ka na-echekwa ha. 😉
Nwere ike ịgọnahụ na Linux kewara ekewa?. Kedu ihe si na Solar Sistemụ ya na Sun Linux na mbara ala atọ ya bụ Debian, Slackware, Red Hat, wee bụrụ Otu ụwa niile nwere Galaxies, Suns na Astros ndị ọzọ?.
Gị onye na - agụ ya ma ọ bụ onye ọrụ njedebe, ị ga - ahọrọ amamihe nke nkesa ga - amasị gị n'etiti oke osimiri nke distros dị. Ogo nke ndị kachasị ewu ewu nwere ike ịbụ mmalite dị mma.
Anyị na-akpọ gị òkù ka ị soro isiokwu ndị bipụtara ma ọ bụ bipụtara na DesdeLinux, nke ga - enyere gị aka inweta ezigbo desktọọpụ ma ọ bụ nkesa site na nkesa abụọ gbadoro anya na azụmahịa OpenSuSE (SuSE-Slackware) na CentOS (Red Hat), ma ọ bụ bido na Debian.
Mgbe njegharị ahụ gasịrị, mee ka onye ọ bụla gụpụta nkwubi okwu nke ha ma kwuo maka ha
Ruo mgbe ọzọ ga-esote!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Nkesa karịrị oge nke Linux distros
M oreụrụ iyi, na SuSE bụ ihe na-ewepụ RedHat ... Ọ tụrụ m n'anya na ọ bụ ada nke Slackware ...
Ndewo Omar. M nwere ruo mgbe 7 PM taa ịza ajụjụ. Echi ga-abụ ụbọchị ọzọ. Mgbaghara gị nwere ike ịbịa site na usoro nke nchịkọta ndị RHEL, CentOS, SuSE, OpenSuSE na ndị ọzọ jiri, nke bụ RPM.
Na "timeline" ahụ, kedụ ebe Lxle, sitere na Lubuntu?
Slackware dịkarịa ala ọnwa abụọ karịa Debian. Ma ọ dịghị nke atọ bụ nkesa mbụ, enwere ike ịhụ na eserese n'onwe ya. N'ezie, na wikipedia ha na-arụtụ aka ihe abụọ na-atọ ụtọ (1):
1) Ọganihu dị n'etiti SLS na Slackware, nke n'ụzọ ụfọdụ ga-arụtụ aka na abụọ dịka nkesa zuru oke izizi.
2) Obi nkoropụ na SLS dị ka ihe kpatara Ian Murdock ịmalite ọrụ Debian.
Banyere SuSE Linux, mbụ ọ dabere na Slackware, mana ọ mechara na Jurix (2). Ihe yiri nke Red Hat na mbụ ka ọ belatara na ngwugwu, ọ bụ ezie na ọ bụzịkarị ha ịzụlite ma ọ bụ kwalite teknụzụ ọnụ, dịka btrfs
Ahụ ike !!
M na-ekwu na m nwere naanị ruo elekere asaa nke ụbọchị taa ka m zaghachi azịza. Echi, m kwere gị nkwa, m ga-aza ajụjụ ọzọ.
N'eziokwu, Echere m na ị pụtara acronym LXDE na-egosipụta a Desktọpụ, ma ọ bụ na desktọọpụ gburugburu ebe obibi, ji ya ala oriri nke ngwaike ego. Echere m na ọ bụ ìhè kachasị desktọọpụ kachasị ewu ewu dịka GNOME, KDE, Cinnamon, MATE, XFCE, na LXDE n'onwe ya. Ana m akwado ka ị gaa https://blog.desdelinux.net/escritorios-debian/
ya mere i nwere echiche banyere ya. Ọ pụtaghị na LXDE bụ naanị Debian. Dị nnọọ iche. You nwere ike ịchọta otu esi etinye ya na ọtụtụ nkesa Linux ndị ọzọ.
Ndewo, Pedruchini ziri ezi. Lxle bụ nkesa, yana desktọọpụ LXDE, sitere na Lubuntu 😉
Ị nwetara ya. Achọpụtara m n’aka gị, Pedruchini na Joselu68, na ụdịrị distro a dị. Naanị m gara distrowatch.com, ọ bụ n'ezie LXLE dabere na Debian, Lubuntu. Daalụ maka nkọwa !.
Daalụ maka ịza ajụjụ na ịkọwapụta, Karlggest. N'isiokwu ahụ anyị na-ekwupụta na ha bụ "ndị izizi izizi ga-adị ndụ ruo taa", agbanyeghị na ha gara n'ihu. A naghị agbagha agbagha na, n'otu ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ, atọ ndị a kpọtụrụ aha na-adaba na otu ahụ. A mụrụ ọtụtụ n'ime ha dị ka Projects ma mesịa bụrụ nkesa dị ka nke a.
Ndo, mana esiteghi na Uuto nweta Uuto. yana Tuquito-Linux
En http://distrowatch.com/table.php?distribution=ututo Ha na-agwa anyị na UTUTO, nkesa na-adịghị arụ ọrụ, si Argentina, ma dabere na GENTOO
"Tuquito" dabere na Debian, Ubuntu. Ọ bụ Argentina, ya na tebụl Cinnamon. GNOME, LXDE, dị ka distrowatch.com
Kedu maka iji ụdị nke eserese a? https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linux_Distribution_Timeline.svg
Ọ bịara na-atụ aro otu. : ịmeela:
Daalụ nke ukwuu maka onyinye gị, anyị emelitere edemede mbụ 🙂
Sundaybọchị ọma, Mauro. Daalụ maka ikwu. Agara m na ihu akwụkwọ Wikipedia ị hotara na ihe nchọgharị njikwa nke Links2 m, ma onyogho a kara oge. Àgwà na-egwu anyị aghụghọ. Nwebiisinka ka dị "Copyright (C) 2010-2012 Andreas Lundqvist, Donjan Rodic". Ma na History of the Archive - File History, Konimex na-emelite ya rue Jenụwarị 28, 2016, n'ihi na ndị dere ya mbụ kpebiri ịghara imelite ya ọzọ. Ka anyị hụ ma Luigys, Onye Nchịkwa Site na Linux, nwere ike imelite ya site na nkọwapụta na-ezo aka na njikọ Wikipedia. Daalụ, Mauro, maka nchọpụta dị otú ahụ ziri ezi.
Anyị emelitere isi onyinyo ahụ, ana m ewere ohere iji kelee gị maka nnukwu ọrụ ị na-eme maka obodo FromLinux, isiokwu ahụ bụ ọhụụ magburu onwe ya maka nkesa n'oge Linux Distros dị iche iche. Ọ dị mkpa ịmata mgbanwe niile nke Linux ghọrọ ka ọ bụrụ taa, n'otu aka ahụ ọ na-enye anyị ọhụụ ọdịnihu nke ihe niile nwere ike ịbịakwute anyị
Luigys: site na Links2 m na-ekele gị maka okwu gị. Ka anyị hụ ma m gwụchaa ihe izizi gbasara CentOS Hypervisor taa. Eduardo Noel na-ebudata ebe nchekwa li.nux.ro/download/nux/dextop/el7/x86_64/ na ndị ọzọ, yana ngwungwu multimedia dị mkpa iji mee desktọọpụ. N’izu a ọ nọ ezumike. N'izu na-abịa, aga m enweta ha nke m. Ekele na ịga nke ọma.
Luis Tz Fernandez dijo
Varietydị dịgasị iche na nkewa nke nkesa Linux bụ ezigbo nsogbu. Ọ bụrụ na anaghị edozi software n'efu, ọ gaghị enwe ike ịtụle sọftụwia nwere nke ya. Ọ dị mkpa ka ndị okike jikọta ma tinyekwuo uche na nkà ihe ọmụma nke Richard Stallman, ọ dị mkpa iji luso sọftụwia nwere ikike na ihu niile.
Zaghachi Luis Tz Fernández
Wireshark dị na 2.2.3
Site na ọnwụ Elastix, ruo ọmụmụ Issabel